Black Leather Corner Sofa ရောင်းရန်ရှိသည်
အမေရိကန်ဒီဇိုင်းအနက်ရောင်သားရေထောင့်ဆိုဖာရောင်းရန်ရှိသည်, ရွှေ့ပြောင်းနောက်ကျော cushoion
Black Leather Corner Sofa ရောင်းရန်ရှိသည်, ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောကျောဘောင်နှင့်လက်ရုံး, ကြီးမားသောထောင့်ဆိုဖာကြီးတစ်ခုအိပ်ရန်အိပ်ရန်ဖြစ်သည်. အိတ်ဆောင်ထိုင်ခုံကူရှင်သည်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးတာရှည်ခံသည်. ဖက်ရှင်, တောက်ပြောင်, သေးငယ်သည့်သတ္တုခြေထောက်များကဆိုဖာကိုပိုမိုဇိမ်ကျစေသည်.
ဧည့်ခန်းပရိဘောဂအစုံလင်သားရေဆိုဖာ, ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောကျောရိုး, နှင့် armrest, ကြီးမားသောထောင့်ဆိုဖာသည်အိပ်ရန်အိပ်ရန်ဖြစ်သည်, အိပ်ပါ. Pocket coil ထိုင်ခုံကူရှင်သည်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးတာရှည်ခံသည်. ဖက်ရှင်, တောက်ပြောင်, သေးငယ်သည့်သတ္တုခြေထောက်များကဆိုဖာကိုပိုမိုဇိမ်ကျစေသည်.
ပစ္စည်း: အထည်; သတ္တုခြေထောက်; အစိုင်အခဲသစ်သား&အထပ်သား; ရေမြှုပ်,သတ္တုယန္တရား
ထုတ်ကုန်အမည်: Black Leather Corner Sofa ရောင်းရန်ရှိသည်; ခေတ်မီသားရေဆိုဖာ;
function ကို: Movable နောက်ကျော Frame ကဆိုဖာ
အပေါ်အတိုင်းအတာ(cm): 303L*248W*88H; စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား
Warranty:2အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံနှစ်ပေါင်းအာမခံ, 1 aniline နှင့်ထိပ်တန်းစပါးသားရေအဘို့အနှစ်
က: Yes, ကျွန်ုပ်တို့တွင် Top grain သားကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများမှရွေးချယ်ရန်အရောင်အမျိုးမျိုးရှိသည်, PVC, PU, သို့မဟုတ်ထည်.
မေး: NBF သည် အတွေ့အကြုံရှိ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် သန့်စင်ရေး ထုတ်ကုန်များအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။?
ဧည့်ခန်းအတွက် L ပုံစံ Grey Tufted Sectional Couch
Room ည့်ခန်းသုံးပရိဘောဂခေတ်သစ်ဒီဇိုင်းအီတလီသားရေဆိုဖာ, အိပ်ရာ, ထောင့်ဆိုဖာအစုံ